My worlds, My creations, My escaping,My madness, My delight - invisible_clover - Wattpad
My worlds, My creations, My escaping,My madness, My delight
#beastiality #historical #cultivation #system
15.9K 824 4
Quickly wear the face of the devil Author: ©®Fengliu Shudai Original translation: ©® keztranslations ကြိူးယှငျ​ရှနျ့​ဆိုတာသိပ်ပံ​ခတျေ​ကhackerတဈ​​ယောကျ​။သူက ဘဝရာ​ထောငျ​ခြီဗီလိနျ​အဖွဈ​ပွနျ​လညျ​​မှေးဖှားဖို့ Lord Godရဲ့​ရှေးခယျြ​ခငျြးကိုခံခဲ့ရတယျ​။ မတူညီတဲ့ဘဝရာ​ထောငျ​ခြီ။ အဓိပ်ပာယျ​မရှိတဲ့ ညှနျ​ကွားခကျြ​အတိုငျးလုပ...
10.7K 682 3
This is my own creation system story. ငါ​သေသွားခဲ့တယ်​ အကြိမ်​​ပေါင်းများစွာပဲ။ ​ငါ့သေဆုံးခြင်းမှာမနာကျင်​ဘူးရယ်​လို့မရှိခဲ့ဘူး...ဘယ်​သူ့​သေဆုံးခြင်းကများညင်​သာပါလိမ့်​မလဲ? အချိန်​​တွေအကြာကြီး ဒီကမ္ဘာအတုထဲမှာဖြတ်​သန်းပြီး​နောက်​ ငါ့ကိုယ်​ငါဘယ်​သူမှန်း​တောင်​​မေ့သွားခဲ့ပြီ။ ငါဟာ ​ယောက်ျားလား? မိန်းမလား? လူလား? V...
26.7K 2.2K 9
အတိတ်​တစ်​ခုသာဖြစ်​ခဲ့ပါ​စေ Type : မြန်​မာဝတ္ထု Start : Feb 16
FIEND [Not BL / No Romance ]
Warning: Pedosexual, Crime ,Fiendish ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရွယ်မရောက်သေးမှန်းသိရင်မဖတ်ပါနဲ့။ဒါကရူးသွပ်မှုတစ်ခုအကြောင်းဆိုးဆိုးဝါးဝါးရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ Cover art Crd to artist Re°
သုံးဘဝကြမ္မာချစ်​ခြင်း​စေရာ [B&G / Translation]
106K 9.5K 20
Original Title - SanSheng, Death Exists Not at the River of Oblivion Original author -Jiu Lu Fei Xiang Eng Translater - Hamster420 Myanmar translater - invisible_clover စန်းရှန်းဆိုတာ​မေ့​ပျောက်​ခြင်းမြစ်​​ဘေးက​ကျောက်​တုံးက​လေး။သူ့ဘဝဟာဒီလိုပဲတ​လျှောက်​လုံး​နေသွားရလိမ့်​မယ်​လို့သူထင်​ခဲ့တယ်​။ဒါ​ပေမယ့်​တစ်​​နေ့​မြေေ...
10.7K 889 3
6နှစ်​တာrelationshipတစ်​ခုကြားမှာတစ်​ခါမှမရဘူး​သေးတဲ့လိုအပ်​ချက်​တစ်​ခုက ​ဟောင်​မိန်​နဲ့​ခေးအိုကြားမှာရှိ​နေတယ်​။ အဲ့ဒီလိုအပ်​ချက်​ကပဲ ​ဟောင်​မိန်​ကိုစိတ်​မသက်​မသာဖြစ်​​စေ​နေတယ်​။ သူထင်​တယ်​ ​ခေးအို သူ့ကိုချစ်​​ကောချစ်​ရဲ့လားလို့? From Love O2O KO and HaoMei
1.5M 132K 78
258K 20.2K 18
Original title - My wangfei isaman Original author - ShiShi Original English translation - Hill_OH Story type - BL, Chinese history, romance,alittle xianxia, imperial, Mpreg, Rate-mature I own nothing all credit to original author and translator. တုန်းဖန်း​ဟောင်​ရယ်​ အတိတ်​​မေ့သွားခဲ့သည်​။ နိုးလာ​တော့ သူဟာ မင်​...
ရိုးစင်း​သောအရာများကိုလူတို့သည်​မခုံမင်​တတ်​ကြ သို့​သော်​ ရိုးစင်​​သောအရာများကလူတို့ကိုစွဲလမ်း​စေတတ်​သည်​။ 612
1.7K 228 1
"ကတိဆိုတာ မတည်​နိုင်​ အစကတည်းကလွယ်​လွယ်​မ​ပေးခဲ့သင့်​တဲ့အရာမျိူး။ For Sekai Fic book 2017 30.12.16
အသုံး​တော်​ခံ || Kray ||
43.4K 2.3K 7
''ကျွန်​'' ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုလူကြား​ကောင်း​အောင်​ ''အသုံး​တော်​ခံ''လို့​ပြောင်း​ခေါ်ကြတာ​ပေါ့။ Requested by Bubble deer and Thandaroo
Sin [Lay x Xing]
29.6K 3.1K 10
လူ့အသိုက်​အဝန်းတွင်​တားမြစ်​ထား​သောအချစ်​များစွာရှိ၏။ ထိုသို့​သောအချစ်​များထဲမှ​သွေးရင်းစပ်​ယှက်​ခြင်းသည်​ ၂၁ရာစု၏ 'အချစ်​' ဟုမတင်​ 'အပြစ်​' ဟုကင်​ပွန်းတင်​နိုင်​သော တားမြစ်​ချက်​ဖြစ်​၏။ Pairing : Zhang Yixing x Zhang JiaShuai Warning: Incest x Bromance
THE TWINS' DESTINY[Rest]
67K 6.3K 21
တူညီတဲ့မိဘကနေ တူညီတဲ့အချိန်တစ်နေ့ထဲမှာမွေးဖွားခဲ့ပေမယ့် မတူညီတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့မတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြား ကြီးပြင်းခဲ့ရသည့် ညီအစ်​ကို နှစ်ဦး၏ နှလုံးသားက လူတစ်ဦးထဲအပေါ် ထပ်တူကျခဲ့တဲ့အခါ...။ Cover by ExoDoChenLover
43.9K 4.9K 10
ကျွန်​​တော်​ Wattpad ​ပေါ်​ရောက်​တဲ့အချိန်​ တိုင်းသူ့update​လေးကို​မျှော်​​နေမိပါတယ်​။ Happy birthday Mommy Na Eun Sol.ᕙ('▽')ᕗ
50.3K 5.5K 15
Alice -agirl who found the Wonderland. My name is Alice but I am not the girl who found the Wonderland. "Own Creation" Genderbend
My Little World [GxG]
13.4K 1.1K 8
လုလူရဲ့ကမ္ဘာငယ်​​လေးကိုဝင်​​ရောက်​လာတဲ့ အိမ်​ဂျယ်​​လေး။ သူ့ကိုလုလူတစ်​​ယောက်​ပဲပိုင်​ဆိုင်​တယ်​ထင်​ထားတာ။ လုလူမှားသွားခဲ့တယ်​။လုလူဘယ်​တုန်းကမှ သူ့ကိုမပိုင်​ဆိုင်​ခဲ့ဘူး။ တကယ်​​တော့လုလူက သနားစရာအထီးကျန်​ဆန်​လှတဲ့ ​တောင်​​ပေါ်သူ​လေးမျှသာ.. .......။ သူထွက်​သွားရင်​ တံခါးကြီးပိတ်​သွားမှာအဲ့အချိန်​ကျရင်​ လုလူ ကမ္ဘာ​လေးပြန်​​...